Kurima fodya kune pundutso
You are at:Home»NHAU DZEVARIMI»Kurima fodya kune pundutso
By Munyori weKwayedza on	 August 11, 2017 · NHAU DZEVARIMI
MUDZIMAI wangu paakauya pano, nzvimbo yedu rakange iri sango chairo. Takatumidza nzvimbo ino zita rekuti Matovanyika nekuti pakutanga zvakange zvakaoma zvikuru uye takashanda zvishoma nezvishoma mukurima ivhu iri, vanodaro VaRichard Jenami pazuva rekumema zvirimwa papurazi ravo kuMhangura.
‘Takafanana nevarimi vekare veMcDonalds sezvo tinorima zvose zvinosanganisira fodya, chibage, soya beans, nzungu uye tinopfuyawo zvakare mombe, mbudzi nenguruve.
“Zvichienderana nechirongwa chekuvandudza hupfumi hwenyika cheZim-Asset, tinotengesawo zvimwe zvirimwa tazvivandudza kugadzira zvimwe zvinhu zvakaita sedovi nehupfu.
Tine mahekita matatu efodya yekudiridzira pamwe nechidimbu chehekita icho tinorima nemvura yekudenga. Izvi tinoitira kuti tisaise mazai edu mubhasikiti rimwe pamwe nekuti tisazonetseka pakupisa fodya yedu. Takadyarawo fodya yedu mumazuva akasiyana zvakare apo imwe yakadyarwa musi wa28 Gunyana, ichiteverwa neyemusi wa10 Gumiguru neya 27 Gumiguru iyo inodiridzwa nemvura inonaya.
Takadiridza fodya yedu tichishandisa nzira yedrip irrigation tichitsigirwa neTIMB. Kusvika parizvino, tawana mvura inonaya yakadzika kusvika 750mm kubvira pakatanga mwaka wezhizha izvo zvabatsira kuti chirimwa ichi chinge chichikura zvakanaka.
Ndinokurudzira vamwe varimi kuti varambe vachishanda nesimba nekuti kuwanikwa kwechikafu mudzimba nemunyika yose kunotanga nesu. Izvi zvinoitika chete kana tikatora kurima sebhizimisi. Ndinoda kutenda TIMB nekutivakira kwayakaita madhirihora emhando yepamusoro erocket barn ekupisira fodya.
Akadarika mazuva ekuti varimi vaitarisira kupihwa zvinhu pachena, hakuna chemahara. Ngatibhadharei zvikwereti zvemari zvatinenge tapihwa uye tisatengesere goho redu kumwe kudivi. Hatifaniri kuve nemakaro kana tichida kubudirira,” vanodaro VaJenami avo vari kutsigirwa nekambani yeMashonaland Tobacco Company.
Kuti munzwe zvakawanda tibatei panhamba dzeTIMB dzinotevera: 08677004624/6, 0772145166/9, 0279-22082/21982, 025-3439, 067-24268/29246, 0277-2700, 064-7280 ne0271-6772.
Munogona zvakare kutibata panhamba dzeToll Free dzinoti 08006003 / 0731999999 / 0712832804 kana WhatsApp 0731999999 nepadandemutande rinoti info@timb.co.zw